FIFEHEZANA NY VALANARETINA COVID 19 : Mijanona anaty fihibohana ny Faritra Analamanga
Mitohy mandritra ny 15 andro manaraka indray ny fihibohana ho an’ny Faritra Analamanga, raha toa ka manomboka mivaha tsikelikely ny amin’ny Faritra Atsinanana sy Analanjirofo ary Alaotra Mangoro. 28 juillet 2020
Fanapahan-kevitra noraisina izany manoloana ny ady mbola atrehina hoentina handresy ny fihanaky ny valanaretina Covid 19 eto Madagasikara.
Araka ny tapaka tao anatin’ny filan-kevitry ny Minisitra, ny faran’ny herinandro teo, dia mitohy ao anatin’ny 15 andro vaovao indray ny fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana manerana an’i Madagasikara. Misy ireo fepetra vaovao noraisin’ny fitondram-panjakana mifandraika amin’izany.
Ho an’ny eto amin’ny Faritra Analamanga manokana dia tsy misy fiovana firy ireo fepetra ara-pahasalamana efa noraisina teo aloha. Mbola mijanona tanteraka anaty fihibohana ny mponina rehetra eto Analamanga, manomboka androany. Voarara ny fivezivezena ivelan’ny trano raha tsy misy antony mazava. Olona iray isan-tokantrano ihany no afaka mivoaka miantsena ary tsy maintsy manao aron-tava. Izay tsy manao izany dia hampiharana sazy.
Nitarina manomboka amin’ny 6 ora maraina ka hatramin’ny 1 ora antoandro kosa ny fisokafan’ny tsenam-pokotany. Mbola miato avokoa ny fitateram-bahoaka raha afaka miasa ary tsy mahazo mitondra olona mihoatran’ ny telo kosa ireo fiarakaretsaka. Mbola tsy miverina mianatra mpianatra na ireo hanala fanadinam-panjakana aza. Afaka miasa ireo orinasa tsy miankina raha toa ka afaka miantoka ny fivezivezin’ireo mpiasa ao aminy ary tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny fitondrana razana dia mbola voarara hatreto, tahaka izany ihany koa ny tsy fahafahana mivoaka sy miditra ny Faritra Analamanga. Mbola miato avokoa ny zotra nasionaly sy rezionaly.
Ho an’ny Faritra Atsinanana, Analanjirofo ary Alaotra Mangoro dia nohalefahana ireo fepetra noraisina izay azo lazaina ho efa mivoaka tsikelikely anaty fihibohana. Manomboka amin’ny 6 ora maraina hatramin’ny 5 ora hariva no afaka miasa ny mpiasa ary afaka misokatra ny tsena. Ny tsy fahafahana mivoaka amin’ny alina dia mbola mihatra ho an’ny Faritra rehetra. Tahaka izany ihany koa ireo Faritra hafa izay efa ahitana ny trangana Coronavirus kosa dia afaka mampihatra io tsy fahafahana mivoaka amin’ny alina io. Ireo tompon’andraiki-panjakana eny an-toerana no mametraka ny lamina mahakasika ny tsena sy ny fivezivezena anatiny ao aminy. Fepetra iraisan’ny Faritra ny tsy fahafahana mamory olona mihoatran’ny 50 isa, mbola mikatona avokoa ireo toerana fandraisana lanonana rehetra, ny lanonana ara-panatanjahan-tena sy ny maro hafa.
Nahomby ny femerenana fihibohana teto Analamanga
Feno telo herinandro katroka izay no niverina nihiboka indray ny teto amin’ny Faritra Analamanga. Fanapahan-kevitra izay noraisin’ny fitondram-panjakana taorian’ny fahitana ny fitomboan’ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Coronavirus. Araka ny tatitra ofisialy nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian omaly dia azo lazaina ho nahitam-pahombiazana ny namerenana ny vahoaka teto Analamanga niditra tao anatin’izay fihibohana izay.
Nihena ny tranga vaovao teto Analamanga nandritra izay telo herinandro izay raha mitaha tamin’ny antontan’isa tany amin’ny fiantombohan’ny volana jolay izay tsy nisian’ny fihibohana. Fantatra fa nahatratra hatrany amin’ny 300 mahery isan’andro ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina tamin’izany ary nihena be io tarehimarika io rehefa niverina tamin’ny fihibohana indray ny olona. Tamin’ny herinandro voalohany nanombohan’ny fihibohana dia nihena ho 276 isan’andro ny tranga vaovao hita tamin’ny fitiliana miisa 4 500 natao.
Ny herinandro farany teo kosa dia nahatratra 280 ny tranga vaovao tao anatin’ny fitiliana 4 600. Izany hoe, mitombo ny fitiliana vita kanefa ny tranga vaovao voamarina tsy dia mitombo be. Afaka ilazana izany, hoy ny Praiminisitra, fa azo fehezina tsara ity valanaretina ity. Nanamarika mazava ny Praiminisitra fa antony lehibe ho tombontsoa iombonana, ho an’ny vahoaka ary ho an’ny firenena iray manontolo ny nanaovana ny fihibohana, na dia fanapahan-kevitra tena sarotra noraisina aza. Tanjona, hoy izy, dia tsy ho toy ireny zava-mitranga any ivelany ireny ny hisy eto Madagasikara. Any amin’ireo firenen-dehibe izay mahatratra an’arivony ny tranga vaovao ao anatin’ny iray andro ary hatrany amin’ny 500 isan’andro ny olona maty. Manao ny ezaka rehetra hiarovana ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana, mitohy hatrany izany ezaka izany ary azo tsapain-tanana amin’ny vokatra azo. Hatreto tsy mitsaha-mitombo ireo olona sitrana soa aman-tsara. Tamin’ny herinandro voalohany nanombohan’ny fihibohana dia miisa 1 200 ireo marary sitrana soa aman-tsara ary tafakatra ho 2 400 izany tamin’ny herinandro fahatelo, izany hoe, tafiakatra avo roa heny. Tsy mikely soroka amin’ny fametrahana lamina vaovao ahafahana manamora ny fandraisana an-tanana an’ireo marary ihany koa ny fanjakana. Tafiditra ao anatin’izany ny fametrahana ireo ivon-toerana fanaovana fitiliana manerana ny Nosy, ny fametrahana an’ireo ivon-toerana fitsaboana sy fikarakarana an’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina.
Mila hajaina ny antanan-toha-pahefana
Ny fitondram-panjakana izay tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina dia mametraka ho laharam-pahamehana ny fametrahana fanjakana tsara tantanana sy atokisan’ny vahoaka. Betsaka ireo fanovana natao teto amin’ny firenena nandritra ity fitondrana ity. Anisany notanisain’ny Praiminisitra tamin’izany ny tsy fahafahan’ireo olom-panjakana mampiasa anjomara amin’ny fiara intsony rehefa mandeha eny amin’ny arabe. Eo ihany koa ny fametrahana takelaka mena amin’ireo fiaram-panjakana mba hanavahan’izy ireo amin’ny fiara tsotra. Noraisina ireo fanapahan-kevitra ireo, raha ny fanazavana, mba hamerenana tanteraka ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitondram-panjakana. Manoloana ny vaovao niparitaka tamin’iny herinandro lasa tamin’ny fihetsika nataon’ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Ny Profesora Ahmad Ahmad dia nisy ny fanazavana noentin’ny Praiminisitra. Ity farany izay hentitra fa mila hajaina ny antanan-toham-pahefana rehefa misy fanapahan-kevitra raisina indrindra ao anatin’ny ady lehibe sy goavana hatrehin’ny firenena tahaka izao. Ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, hoy ny Praiminisitra, dia tokony hifampierana avokoa. Notsipihiny mazava tsara fa tsy misy idiran’ny adim-poko ao anatin’izany resaka izany. Mila averina ny fanarahan-dalàna, hoy izy, ary tsy maintsy hajaina ny antahan-toha-pahefana misy eto amin’ny tany sy ny firenena.
Misy ny paik’ady apetraka eny anivon’ny Faritra
Azo lazaina ho efa mihanaka tanteraka manerana ny Nosy ny valanaretina Covid- 19 ankehitriny. Faritra miisa telo amin’ireo 22 mandrafitra an’i Madagasikara sisa no tsy mbola nahitana trangana Coronavirus. Ho an’ireo Distrika sy Faritra efa voakasika dia misy lamina maty paika apetraky ny fitondram-panjakana mba ahafahana miady sy mamehy ny fiparitahan’ny valanaretina. Miara-misalahy amin’ny fanatanterahana izany avokoa miainga amin’ny fanjakana foibe, ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka ary mipaka any amin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny Distrika tsirairay avy. Ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina hoenti-miady amin’ity valanaretina ity dia miainga avy any amin’ny Filoham-pirenena avokoa. Araka ny fanazavana efa nomen’ny sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka dia manolotra soso-kevitra ny eo anivon’ny Minisitera fa ny tompon’ny fanapahan-kevitra dia ny Filoham-pirenena irery ihany. Eo anatrehan’ny fisian’ny valanaretina any amin’ny Faritra dia nisy ny fametrahana ny ivon-toeram-pandrindrana ny ady amin’ny Covid 19 ho an’ny Faritra na CRCO. Ity farany no hitantanana feno ny valanaretina miainga amin’izay toromarika omen’ny fitondram-panjakana.
Tsy misy ny miasa irery, mifandrimbona ny fitondram-panjakana miaraka amin’ny Minisiteran’ny fahasalamana. Ny Fanjakana no mamatsy ara-pitaovana ny toeram-pitsaboana, mamatsy ara-pitaovana an’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ny ireo mpikarakara marary rehetra. Anjaran’ireo tompon’andraikitra mampandeha ny CRCO kosa no mandrindra ny asa rehetra eny ifotony. Hatreto, betsaka ny ezaka efa vita. Faritra maro ary Hopitaly maro manerana ny nosy no efa nahazo fampitaovana avy amin’ny fitondram-panjakana hoentina hanamafisana ny ady hatao amin’ity valanaretina ity.
Anaty fahasarotana tanteraka ny firenena ankehitriny. “Mahatsapa ny fahasahiranana lalina iainan’ny vahoaka ny mpitondra saingy ny aina no ambonin’ny zavatra rehetra”, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Na izany aza anefa dia manao ny ezaka rehetra amin’ny fanampiana ny vahoaka Malagasy ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny Tosika fameno dia misy ihany koa ny tsena sosialim-bahoaka hoentina hanampiana an’ireo tokantrano tena marefo.
Tsena maro eny anivon’ny Fokontany no miara-miasa amin’ny fanjakana ary afaka mamatsy an’ireo tokantrano ahitana fianakaviana sahirana. Efa mandeha izany hetsika izany, ary mitohy hatrany hoentina hanohanana an’ireo olona tena mila izany. Ankoatra izay dia nasian’ny Praiminisitra fanazavana ihany koa ny mahakasika ny fiakaran’ny vidin’ny fanafody amin’izao fotoana izao. Nambarany fa hijerena vahaolana izany, izay nanaovany antso avo tamin’ireo mpisehatra eo amin’ny lafiny famarotana fanafody mba tsy hifanararaotra amin’ny vanim-potoana sarotra tahaka izao. Nanome toky ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy fehezina ny vidin’ny entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro. Hisy ny hetsika lehibe izay hatao manerana ny Nosy mba hifehezana izay vidin’entana izay mba tsy hisian’ny mpanararaotra.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4742) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (139) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021